Dilalka ka dhaca Muqdisho oo kordhaya , Caawana yaa la dilay? – Hornafrik Media Network
Dilalka ka dhaca Muqdisho oo kordhaya , Caawana yaa la dilay?
Hornafrik-Kooxo hubeysan ayaa maanta gelinkii danbe waxaa ay magaalada Muqdisho dilal ugu geysteen mid kamid ahaa shaqalaah Barlamaanka Soomaaliya iyo Askari ka tirsanaa ciidanka ilaalada shuruucda wadooyinka ee Taraafikada sidoo kale labo qof kale ayaa la dhaawacay.
Waaxda Horseed ee degmada waaberi meel u dhaw jidka shaqaalaha ayaa kooxo hubeysan waxaa ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen sida la warinayo afar qof waxaana ku dhintay ni magaciisa lagu sheegay Cumar Dalxa Maxamuud oo kamid ahaa shaqalaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo uu sido kale ku dhaawacmay qof kale.
Dhinaca kale degmada Boondhere xaafada Maanabooliyo ayaa abaaro maqribkii caawa waxaa dabley bastoolado ku hubeysnaa ku dileen askari ka tirsanaa ciidanka taraafikada Soomaaliya iyadoo uu dhaawac gaaray haweeney halka ninka askariga ah lagu dilay qaad ku iibineysay.
Dilalka ka dhacaya muqdisho aya noqday kuwo is daba jog ah , in kabadan 10-qof ayaa la dilay mudo ku siman toban cishe , labo kamdi ahaa ergadii soo doortay xildhibanada ayaa habeno is xiga waxaa lagu dilay degmada dharkenley askarigan caawa la dilay e taraafikada ayaa oqonaya kii labaad ee isla taraafikada ka tirsan oo udo todobaada h magaalada lagu dilo waxaana amniga Muqdisho walaac ka muujinaya bulshada ku dhaqan.
G/ Baarlamaanka iyo M/ ku xigeenka Galmudug oo laga hor istaagay in ay tagaan xaruntii maamulka ee Cadaado.